Gudoomiyaha Wakiilada Somaliland oo qaba in la hakiyo wadahadalka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
25th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland, ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee WADANI, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro), ayaa soo jeediyey in la hakiyo wada-hadalada muddooyinkii danbe u socday dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland inta ka haray qabsoomida doorashooyinka fooda inagu soo haya.
Gudoomiye Cirro ayaa sheegay in muddadii saddexda sanno ahayd ee ay socdeen wada-hadaladaasi aanay ka soo baxin wax natiijo ah, isaga oo xukuumada Somaliland ku dhaliilay talaabadii ay ka qayb galka shirkaasi kaga joojisay in ay qayb ka ahaadaan xisbiga mucaaradka ahi.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro), ayaa hadalkan ka sheegay waraysi gaar ah siiyey talefeeshanka Kalsan, waxaana uu sheegay in muddada yar ee hada u hartay xukuumada Siilaanyo aanay suurtagal ahayn in wada hadalka u socda Somaliland iyo Soomaaliya ay ka soo baxaan wax miro dhal ah.
“Shirkii Somaliland iyo Soomaaliya horta go’aankii lagu galay in la bilaabo waxaa uu ahaa go’aan qaran oo loo dhan yahay, waxaa lagu bilaabay axsaabta iyo xukuumadu in ay ka wada qayb galaan wada hadalada, waxaad ka warqabtaan in axsaabtii ay xukuumadu ka saartay oo ay kaligeed ku kaliyeysatay, markaa ha kuba kaliyeysato oo haddii ay wax ka soo baxaan waa ay fiicnaan lahayd, wax ka soo baxayna illaa hada ma jiro” ayuu C/raxmaan Cirro.
“Hal qodob ayaa illaa hada ka soo baxay ayaa la yiri qodobkiina waa laga noqday, markaas shirkaasi wali shir ay wax ka soo baxeen maaha, waxaana ay illa tahay shirka saddexdiis sano ay wax ka soo bixi waayeen hadana iyada oo ay xukuumadana cimrigeedii uu ka hadhay saddex bilood ama afar bilood wax badan ka soo bixi maayaan, marka taladayadu waxaa ay tahay in illaa doorashada ka dib la hakiyo wada-hadalada Somaliland iyo Soomaaliya u socda” ayuu sidoo kale yiri Cabdiraxmaan Ciro.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo sida oo kale hadalkiisa sii wata, ayaa waxaa uu sheegay in go’aanka ka xisbi ahaan uga yaala haddii ay xukuumadu si badheedh ah dalka doorasho uga qaban waydo ay tahay in ay ku baaqayaan in la dhiso dawlad ay u jeedadeedu tahay sidii ay dalka doorasho uga hirgalin lahayd, isaga oo tilmaamay in ficilada ay samaynayso xukuumada Siilaanyo ay muujinayaan in aanay diyaar u ahayn in ay doorasho ka qabato dalka. Waxaana uu carabka ku adkeeyey in haddii ay si badheedh xukuumada Siilaanyo dalka doorasho uga qaban waydo ay jabisay dastuurkii qaranka u yaalay.
“Go’aan kayagu waxaa uu ahaa haddii ay xukuumadu si badheedh ah ay isu hortaagto in doorashada la qabto, qarankuna aanu waxba ku heshiis ahayn wakhtigaa ka hor, waxaa u noqonayaa xalka ugu wanaagsani in cid dhex dhexaad ah oo doorasho qabata oo ah xukuumad ku meel gaadh ah u jeedadeeduna ay tahay oo qudha in ay doorasho qabato in la sameeyo, haday xukuumadu si badheedh ah isu hor istaagtana waa dastuur jabin, xukuumada gudashada ama qabashada doorashadu waxaa ay u baahan tahay waa go’aan siyaasi ah, go’aanka gudida doorashooyinku waa farsamo, xukuumadu in ay hortaagan tahayna ficilkeeda ayaa tilmaamaya oo 2013-kii waxii la bilaabay ee diyaar garowgii muu dhamaan waayi kareen” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cirro.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, waxaa uu ugu danbayntii sheegay in ay ka xisbi ahaan ay diyaar u yihiin in ay doorashada ka qayb galaan isaga oo tibaaxay in ay buuxin doonaan dhamaanba shuruurdaha looga bahaan yahay ka hor 45-cisho doorashada fooda inagu soo haysa.
“Annagu waanu u diyaar garonay doorashadii, shirar ayaa na laga rabaa, shirarkii qaar waabaa aanu iclaaminay, waxii hadhsanana waanu iclaaminaynaa waana aanu dhamaystiraynaa wax allaale iyo waxii na laga rabo ee sharcigu naga rabay, wakhtigana u xadiday sharcigu ee ka hor muddada 45 cisho ah wakhtiga doorashada” ayuu yiri guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada Cabdiraxmaan Ciro.
Wasiirka arrimaha debadda Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis ayaa shalay sheegay inaan waxba isaga jirin doorashada iyo wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland oo ay wada hadalkii sii wadi doonto cidda markaas kursiga hogaanka ku fadhida.
Muqdisho: Meydka gabar laga helay meel ka mid ah Xeebta Liido